रंगमञ्चमा बालबालिकाको रोचक प्रस्तुति
१० जेठ, २०७५
काठमाडौं : नयाँबानेश्वर संगमचोकस्थित काठमाडौं प्रज्ञा कुञ्ज स्कुलको प्राङ्गण । सुनसान प्लेग्राउन्ड । अलिकति अगाडि रातो मखमलको पर्दाले छोपिएका अभिनय कक्ष । त्यहाँ फरकफरक ड्रेस लगाएका विद्यार्थी, केही अभिभावक र शिक्षकशिक्षिका कुर्सीमा बसेका छन् । मञ्चमा साना भाइबहिनीले अभिनय गरेको नाटक ‘चार्ली एन्ड द चकलेट फ्याक्ट्री मञ्चन भइरहेको छ ।
प्रज्ञा कुञ्ज स्कुलमा सञ्चालन भएको नाटक सप्ताह गत मंगलबार सम्पन्न भएको छ । कक्षा ४ देखि ९ सम्मका विद्यार्थी सहभागी भएको नाटक सप्ताह पाँच दिनसम्म चलेको थियो । रंगकर्मी अनुप बरालको प्रमुख आतिथ्यमा सञ्चालन भएको नाटक महोत्सवमा विद्यालयका तीन सय विद्यार्थीले अभिनय गरेका थिए । नाटक हेर्न विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी आएका थिए ।
उद्घाटनको दिन नाटकहरू ‘भोला’ र ‘पहेँलो बस’ मञ्चन गरियो । एकजना सज्जन मानिसले टुहुरो बालकलाई पढ्न सहयोग जुटाउन गरेको संघर्ष नाटकमा देखाइएको थियो ।
भूकम्पपछि गाउँबाट काम गर्न सहर ल्याइएकी केटीको कथा पहेँलो बसले भनेको छ । उसलाई पढ्ने रहर छ । साहुको घरमा कामले गर्दा कहिल्यै फुर्सद छैन । साहुका छोराछोरीलाई स्कुल बसमा पु¥याउन जाँदा देख्ने पहेँलो बस उसलाई खुब मन पर्छ र त्यही बस चढेर स्कुल जाने सपना साँचेकी छे । राजकुमार सिद्धार्थ कसरी गौतम बुद्ध कहलिए भन्ने कथा उज्यालोतिरमा देखाइएको थियो ।
एउटा गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीले बिहान १० बजेसम्म सडक बढार्ने काम गरेर पनि ऊ स्कुलमा रोल नं. चार हुन्छ । यसका लागि उसले कति मेहनत गर्नुपर्ला ? यो कथा रोल नं. चारको हो । महोत्सवको तेस्रो दिन किताबभित्र किताबबाहिर र ब्युटी इज अ बेस्ट तथा अन्तिम दिन हीराको भोटो र चार्ली एन्ड द चकलेट फ्याक्ट्री मञ्चन भएको थियो । सबै नाटकको निर्देशन टंक चौलागाईंले गरेका थिए ।
६ वर्षदेखि निरन्तर नाटक मञ्चन गरिरहेको प्रज्ञा कुञ्ज स्कुलले अघिल्लो वर्ष मोबाइल थिएटर आयोजना गरेको थियो । यो नाटक सप्ताह त्यसैको निरन्तरता हो । विद्यालयकी प्रिन्सिपल सुनिता पौडेलका अनुसार अभिनयको कक्षा विगत पाँच वर्षदेखि विद्यालयको पाठ्यक्रममा नै समावेश गरेर पढाइँदै आएको छ । यसले विद्यार्थीलाई पढाइका साथै अतिरिक्त सीपमा पनि सक्षम बनाउने उनको दाबी छ । उक्त विद्यालयबाट अभिनय सिकेका विद्यार्थीले विभिन्न थिएटरमा समेत नाटक देखाउँदै आएका उनले बताइन् । समापनको दिन अभिनेता सरोज खनालले उत्कृष्ट बालकलाकारलाई पुरस्कार प्रदान गरे ।